အမေရိကန်နိုင်ငံ University of California က သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်သုံးခုကို အမှတ်အများကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း သူမတူအောင်ထူးချွန်သလို သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း နှစ်ယောက်မရှိနိုင်အောင် တော်လွန်းတဲ့ ချစ်သုဝေကတော့ အပျိုဘဝကတည်းကနေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို မလျော့စတမ်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပီပီ ဥာဏ်လည်းကောင်းပြီး သူများထက် ထူးချွန်ထက်မြက်သူလေး တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာလည်း ချစ်သုဝေက ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်အကျိုးရှိစေမယ့် သင်တန်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ တက်ရောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေက တစ်လအတွင်းမှာတင် University of California က The Foundations of Happiness at Work, Mindfulness and Resilience to Stress at Work, Empathy and Emotional Intelligence at Work စတဲ့ သင်တန်း (၃) ခုကို အမှတ်တွေအများကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တာကြောင့် “ ဟုတ်တယ်….. ငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ!!!!!!! မေမေ ထရီဇာက ဒရာမာတွေ အများကြီးကြားမှာ ဒီဂရီတွေနဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ… yahoo ” ဟုဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းသာအားရပြောလာပါတယ်..။
အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေကတော့ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွေကြားထဲက သင်တန်းတွေကို ကြိုးစားပန်းစားတက်ရင်း သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်တွေအများကြီးကို ရရှိခဲ့တာ လေးစားစရာပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်သုဝေကို လေးစားပြီးရင်းလေးစားနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာလညျး သူမတူအောငျထူးခြှနျသလို သီခငျြးဆိုတဲ့နရောမှာလညျး နှဈယောကျမရှိနိုငျအောငျ တျောလှနျးတဲ့ ခဈြသုဝကေတော့ အပြိုဘဝကတညျးကနေ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို မလြော့စတမျးရရှိပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။အဆိုတျောသရုပျဆောငျ ခဈြသုဝကေ ဆရာဝနျတဈယောကျပီပီ ဉာဏျလညျးကောငျးပွီး သူမြားထကျ ထူးခြှနျထကျမွကျသူလေး တဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ လကျရှိကိုဗဈကာလမှာလညျး ခဈြသုဝကေ ပရဟိတအလုပျတှေ လုပျကိုငျရငျးနဲ့ပဲ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျအကြိုးရှိစမေယျ့ သငျတနျးတှကေို အှနျလိုငျးကနေ တကျရောကျနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။
ဒီတဈခေါကျမှာလညျး အဆိုတျောသရုပျဆောငျ ခဈြသုဝကေ တဈလအတှငျးမှာတငျ University of California က The Foundations of Happiness at Work, Mindfulness and Resilience to Stress at Work, Empathy and Emotional Intelligence at Work စတဲ့ သငျတနျး (၃) ခုကို အမှတျတှအေမြားကွီးနဲ့ ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ “ ဟုတျတယျ….. ငါလုပျနိုငျခဲ့ပွီ!!!!!!! မမေေ ထရီဇာက ဒရာမာတှေ အမြားကွီးကွားမှာ ဒီဂရီတှနေဲ့ အစီအစဉျကို ပွီးဆုံးခဲ့ပွီ… yahoo ” ဟုဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ဝမျးသာအားရပွောလာပါတယျ..။
အဆိုတျောသရုပျဆောငျ ခဈြသုဝကေတော့ သမီးနှဈယောကျနဲ့ အလုပျတှကွေားထဲက သငျတနျးတှကေို ကွိုးစားပနျးစားတကျရငျး သငျတနျးဆငျးအောငျလကျမှတျတှအေမြားကွီးကို ရရှိခဲ့တာ လေးစားစရာပါပဲနျော။ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြသုဝကေို လေးစားပွီးရငျးလေးစားနကွေမယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။